Sudden Strike Crimea Game...! | အိမ်လွမ်းသူ...
ကျွန်တော်ဒီတစ်ခါ သူငယ်ချင်းတို့အတွက် Game... လေးတင်ပေးလိုက်ပါတယ်....! Flash Game လေးပါ...! စစ်တိုက်ရတာ ဝါသနာပါတဲ့ သူတွေယူထားနော်...! Sudden Strike Crimea Game... လေးပါ...! ဆော့ရတာစိတ်ဝင်စားဖို့တော့ကောင်းတယ်...!ဖိုင်ဆိုဒ်ကတော့ 178MB ရှိပြီး Full Version လေးပါ...!လိုချင်ရင်တော့ အောက်မှာMedia Fire လေးဖြင့်တင်ပေးထားတယ်...!
No Response to "Sudden Strike Crimea Game...!"